DEG DEG:Dagaalka Tukaraq ee Puntland & Somaliland oo ay kusoo biireen Ciidamadii Cali Khaliif + Muuse Biixi oo 500 oo Askari…….. – Puntland News.net
Home 2018 January 12 Puntland News, Somali News DEG DEG:Dagaalka Tukaraq ee Puntland & Somaliland oo ay kusoo biireen Ciidamadii Cali Khaliif + Muuse Biixi oo 500 oo Askari……..
DEG DEG:Dagaalka Tukaraq ee Puntland & Somaliland oo ay kusoo biireen Ciidamadii Cali Khaliif + Muuse Biixi oo 500 oo Askari……..
Wararka Warsidaha Puntlandnews.net uu haatan ka helayo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa sheegaya in ay kusii biireen ciidamada maamulka Somaliland ciidamo ah malayshiyaad u daacada Cali Khaliif Galaydh.
Hogaamiyaha maamulka Somaliland ayaa u qoray Cali Khaliif Galaydh maleeshiyaad u daacad ah kuwaa oo xarumo looga dhigi doono deegaanada Koonfurta ah ee gobolka Sool sida ay noo xaqiijiyeen goob-joogayaal u dhuun daloola arimahaasi.
500 oo maleeshiyo ah ayaa wajigii hore ee wada hadalada Khaatumo iyo Somaliland lagu sheegay in 250 maleeshiyo la siiyay Beesha Bahararsame 150 maleeshiyana la siiyay Beesha Guuleed Garaad Barkad kuwaas oo xiligani la sheegay in ay kusii biireen dagaalka u dhaxeeya ciidamada Somaliland iyo Puntland ee deegaanka Tukaraq iyaga oo kaabaya ciidamada Somaliland.
Hogaamiyaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo maanta la filayo in uu booqasho kusoo gaadho magaalada Laascaanood ayaa waxaa safarkiisu ku wehelinaya sida ay tibaaxayaan xogaha Puntlandnews.net Dr. Cali Khaliif Galaydh oo isagu ah siyaasi qab qable ah isla markaasna xiligani qayb ka ah qorshaha dagaal ee Somaliland ay kawado deegaano ka tirsan gobolka Sool.
Mr. Biixi ayaa la sheegay inta uu ku sugan yahay gobolka Sool in uu booqan doono deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ee ay isku hor fadhiyaan ciidamada Somaliland iyo Puntland, isagoona ujeedka safarkiisa Tukaraq lagu sheegay u kuur galida deegaankaasi iyo goobaha ay kaga sugan yihiin ciidamada maamulka Somaliland.
Hogaamiye Biixi hore u soo noqday Korneyl ciidan dowladdii dhexe ee Soomaaliya ayaa la sheegay in ay ka go’an tahay dagaal dhex mara ciidamadiisa iyo ciidamada Somaliland, isagoona ku taamaya gaadhsiinta Somaliland xuduud beeneedka ay sheegtaan.